LA Burmese concert III , Tun Tun and Kyaw Kyaw Bo
LA Burmese concert III , Tun Tun and Kyaw Kyaw Bo withagreat good humor and eloquent speeches
by thu Zar( Face Book)
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 8/30/20110အကြံပြုခြင်း
30 August 2011 Yeyintnge's Diary
ယနေ့ ရွှေဈေး၊ ဒေါ်လာဈေးနဲ့ FEC ဈေး
by Myit Makha Mediagroup on Tuesday, August 30, 2011 at 3:26am
ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် ၁၆ပဲရည်အခေါက်ရွှေဈေး တကျပ်သားလျှင် ကျပ် ၆သိန်း ၉ သောင်း ၇ ထောင်၊ ၁၅ ပဲရည် တကျပ်သားလျှင် ကျပ် ၆ သိန်း ၄ သောင်း၊ ၅ ထောင် ဈေးပေါက်လျက်ရှိပြီး အမေရိကန် တဒေါ်လာလျှင်ကျပ် ၇၃၀(Buy) ဈေးနှင့် fec (Buy)တယူနစ် လျှင် ကျပ် ၆၇၀၊ ဈေးပေါက်လျက်ရှိသည်။ USD (Sell) က တဒေါ်လာလျှင် ၇၄၅၊ fec (Sell)တယူနစ်လျှင် ကျပ် ၇၀၀ ဈေးပေါက်လျက်ရှိပါတယ်။
Aung Kyaw Thu ... FEC တွေ တစ်ယူနစ် ၀ယ်ဈေးက ၇၀၀ ဖြစ်သွားပြီလို့ ခုလေးတင်သိရပါတယ်...
ငွေလဲနှုန်း သတ်မှတ်ရေး – စီးပွားရေးမဂ္ဂဇင်း အယ်ဒီတာချူပ်ကို မေးမြန်းခြင်း
Published on August 30, 2011 by ရွှေအောင်
မကွေးတွင် ဆည်ရေလွှတ်၍ ရေကြီးပြီး ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ
Published on August 30, 2011 by နော်နိုရင်း
သုံးရက်ဆက်တိုင်း မိုးကြီးရေလျှံလို့ မကွေးမြို့နယ်မှာ နတ်မောက်၊ စွန်၊ ဆဒ္ဒန် စတဲ့ ရေလှောင်တမံတွေ ရေလွှတ်ချတဲ့အတွက် ဆည်အောက်ဘက်ရှိ လမ်းတံတား၊ ကျေးရွာနဲ့ လယ်ယာခြံမြေတွေ ပျက်စီးသွားတယ်လို့ မကွေးမြို့ခံတွေက ပြောပါတယ်။
နတ်မောက်ရေလှောင်တမံကနေ ၂၈ ရက်နေ့က ရေလွှတ်ချတဲ့အတွက် ယင်း ချောင်း ရေတက်ပြီး ဒီနေ့မှာ ဂွေးချောင်းတံတားကျိုးသွားလို့ မကွေး – နေပြည်တော် အသွားအလာ ရပ်သွားပြီလို့ မကွေးမြို့သစ်နေတဦးက ပြောပါတယ်။
“၂၈ ရက်နေ့မှာ လဲလူးကျေးရွာက ရေမြုပ်တယ်၊ နေပြည်တော်လမ်းမှာ ယင်း ချောင်းတံတား မိုင်တိုင်အမှတ် ၃၁-၁ နဲ့ ၃၁- ၃ ကြားမှာ ပေ ၂၀၀- ၃၀၀ လောက် ပြတ် ထွက်သွားပြီးတော့ အဲဒီကရေဟာ ကမ်းလုံးပြည့်ရေကြီးတယ်။ ဒီနေ့ကျတော့ မြို့သစ်နဲ့ ရွှေဘန်းကြားမှာ ရေကျော်ပြီးတော့ ကွန်ကရစ်တံတား ပြုတ်သွားပြီး ကားသုံးစီး ပိတ်နေ တယ်။ မကွေးကိုသွားတဲ့ကားတွေ ပိတ်နေတယ်။”
ရေစလွှတ်တဲ့ ၂၈ ရက်ညမှာ မကွေးမြို့သစ်နဲ့ ၃ မိုင်လောက်ဝေးတဲ့ ထန်းတပင်ရွာမှာ အိမ် ၇ လုံး ရေထဲမျောသွားသလို တခြားရွာက လယ်ကွင်းတွေ၊ ခြံမြေတွေ မျောပါပျက်စီး ကုန်တယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။
“ဖြည်းဖြည်းချင်း ကမ်းပါးပြိုကျတာဆိုတော့ လူတွေတော့ အန္တရာယ်မရှိဘူး။ တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ အိမ်တွေတော့ ပါသွားတယ်။ ၂၉ ရက်နေ့မှာ မြင်သာကျေးရွာမှာရှိတဲ့ အိမ်ခြေ ၁၅ လုံးလောက်ကို အရေးပေါ် တောက်လျှောက်ရွှေ့နေရတယ်။ ပုလဲရေ လှောင်တမံနားက လယ်ယာမြေတွေ ရေလွှမ်းမိုးပြီးတော့ ပဲစဉ်းငုံ၊ ပဲတီစိမ်း၊ ၀ါတွေ ဧက ၃၀ လောက် ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးသွားတယ်။”
ယင်းချောင်းရေကြီးမှုကြောင့် မကွေးမြို့သစ် မြို့နယ်တွင်းက လယ်ဧကထောင်ချီ ရေမြုပ်နေပြီး ပျက်စီးမယ့်အနေအထားဖြစ်နေတယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
စွန်ရေလှောင်တမံ ရေလွှတ်တာကြောင့် စွန်ချောင်းရဲ့အောက်ဘက် ကွမ်းခြံရွာက ပဲစဉ်းငုံခင်း၊ ၀ါခင်းတွေနဲ့ ဥယာဉ်ခြံမြေတချို့ မနေ့ညက မျောပါသွားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ရေဘေးသင့်သူတွေဟာ ဘာအကူအညီမှမရသေးလို့ အခက်တွေ့နေတယ်လို့ လည်း ဆိုပါတယ်။
မကွေးမြို့သစ် မြေနိမ့်ပိုင်းရပ်ကွက်တချို့မှာတော့ ခါးလောက်ထိ ရေကြီးနေပြီး မိုးလည်း ဆက်ရွာနေတယ်လို့ မြို့ခံက ပြောပါတယ်။
မကွေးမြို့မှာ အခုရေကြီးမှုဟာ နှစ် ၃၀ အတွင်း အဆိုးဆုံးပဲလို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
မြန်မာတိုင်းမ်နှင့် The Voice သတင်းထောက်များ အစုအပြုံလိုက် အလုပ်ထွက်
မြန်မာတိုင်းမ်နဲ့ The Voice ဂျာနယ်တို့က သတင်းထောက်တွေ အစုအပြုံလိုက် နုတ်ထွက်ပြောင်းရွှေ့သွားတယ်လို့ ပြည်တွင်း သတင်းဂျာနယ် အယ်ဒီတာတဦးက ပြောပါတယ်။
တတိုက်ကို သတင်းထောက် ၁၀ ဦးကနေ ၁၅ ဦးအထိ ပြောင်းရွှေ့ကုန်ကြတာလို့ အဲဒီအယ်ဒီတာက ပြောပါတယ်။
“မြန်မာတိုင်းမ်က သတင်းထောက်တွေကတော့ ဒေါ်လာဈေးတွေလည်း ကျနေ တော့ လစာတွေက ကျနေတယ်၊ ဒီအချက်တွေကြောင့် ပြောင်းတာဖြစ်မယ် တော်တော် များတယ်။ ဂျာနယ်ကထွက်ဖို့ ပြင်နေတာကြာပြီ။”
ဒီသတင်းထောက်တွေဟာ အမှတ် ၁ စက်မှုဝန်ကြီးဟောင်း ဦးအောင်သောင်းရဲ့ သား ဦးနေအောင် ထုတ်မယ့် သတင်းဂျာနယ်ကို ပြောင်းဖို့ အလုပ်ထွက်သွားကြတာဖြစ် ကြောင်း သိရတယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
ဦးအောင်သောင်းရဲ့သား ဦးနေအောင် ထုတ်မယ့် ဂျာနယ်က သတင်းထောက်တ ဦးကို လစာ ကျပ် ၇၀၀,၀၀၀ ထိပေးပြီး ခေါ်နေတာဖြစ်ပြီး ဒါဟာ လက်ရှိ အောင်မြင်တဲ့ သတင်းဂျာနယ် အယ်ဒီတာတဦးရဲ့ လစာနဲ့ ညီမျှပါတယ်။
ခုလို လစာကောင်းကောင်းပေးပြီး ခေါ်နေတာကြောင့် တခြားဂျာနယ်တိုက်တွေဟာ သူတို့သတင်းထောက်တွေကို ရေရှည်မှာ ထိန်းထားဖို့ခက်လာမယ်လို့ သတင်းဂျာနယ် အယ်ဒီတာတဦးက ပြောပါတယ်။
“စီးပွားရေးသဘောအရ လုပ်တဲ့သူတွေကိုတော့ ထိန်းထားဖို့ဆိုရင်တော့ မလွယ် ဘူး။ တခုတော့ရှိတယ်၊ ကိုယ့်တိုက်က ကောင်းကောင်းမွန်မွန် အလုပ်လုပ်တယ်၊ မှန်တဲ့သ တင်းတွေ ဖော်ထုတ်တယ်၊ တိုင်းပြည်အတွက် ပြည်သူတွေ သတင်းအမှန်သိရဖို့ လုပ် တယ်ဆိုတဲ့ ဂုဏ်တွေနဲ့ ထိန်းရင်တော့ ရချင်ရမှာပေါ့။ ငွေရတိုင်းလည်း သတင်းထောက်ဆို တာက ပျော်တဲ့အမျိုး မဟုတ်ဘူး။ အမျိုးမျိုးတော့ ကြံဆရမှာပေါ့။”
သက်ဆိုင်ရာ ဂျာနယ်တိုက်တွေကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းတော့ ပြန်မဖြေဘဲ တယ်လီ ဖုန်းချသွားကြပါတယ်။
၂၀၀၅ ခုနှစ်ကလည်း ဂျာနယ်တွေက သတင်းထောက်တွေ ထွက်ကြတာမျိုး ဖြစ်ဖူးပါတယ်။ ခုချိန်မှာတော့ သတင်းလောကသား များနေတာမို့ ဖြေရှင်းဖို့ အခက်အခဲမ ရှိနိုင်ပါဘူးလို့ စာနယ်ဇင်းသမားတချို့က ပြောပါတယ်။
ထင်ရှားတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီး ၂ ဦး ဂျာနယ် ၁၀ စောင်ထက်မနည်း ထုတ်ဝေခွင့် ရထားတယ်လို့လည်း သတင်းရပါတယ်။
ပြည်တွင်းမှာ ထုတ်ဝေနေတဲ့ ဂျာနယ်ပေါင်း ၁၅၀ ကျော် ရှိပါတယ်။
မြန်မာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ရေပိုင်နက် အငြင်းပွားမှု ကြားနာတော့မည်
သောမတ်စ်မောင်ရွှေ | အင်္ဂါနေ့၊ သြဂုတ်လ ၃၀ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၂ နာရီ ၄၄ မိနစ်
ချင်းမိုင်(မဇ္ဈိမ) ။ ။ ပင်လယ်ပြင် ဥပဒေဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ နိုင်ငံတကာ တရားရုံး (ITLOS) က မြန်မာနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံတို့အကြား အငြင်းပွားနေသည့် ပင်လယ်ပြင်နယ်နိမိတ် ပိုင်ဆိုင်မှု ပြဿနာကို စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့တွင် စတင်ကြားနာတော့မည် ဖြစ်သည်။
စီးပွားရေး အလားအလာကောင်းသည့် ကမ်းလွန်ရေနံနှင့် သဘာဝဓါတ်ငွေ့သိုက်များအတွက် နှစ်နိုင်ငံအကြား အငြင်းပွားနေသည်မှာ နှစ်ကြာရှည်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး အငြင်းပွားမှုသည် မကြာသေးခင် နှစ်များအတွင်း ပိုမိုပြင်းထန်လာ
ITLOS တရားရုံး၏ ကြားနာမှုကို ယင်းရုံးအခြေစိုက်ရာ ဂျာမဏီနိုင်ငံ ဟမ်းဘတ်မြို့တွင် ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။ ဘင်္ဂလာဒေ့ရ်ှအစိုးရက မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် "ကမ်းဦးရေတိမ်ပိုင်းနှင့် အခြေခံမျဉ်းတို့ သဘာဝအတိုင်း ကြာရှည်စွာ တည်ရှိနေခြင်း" ဟူသောအချက်ကို အခြေခံကာ စတင်တိုင်ကြား ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အမှုဆိုင် နှစ်ဘက်နိုင်ငံများမှ အမှုကိုစစ်ဆေးမည့် တရားရုံး
ထရန်အိုးရှင်း အင်တာနေရှင်နယ် ကုမ္ပဏီပိုင် ရေနံတွင်းတူးစင် Actinia၊ ယင်းရေနံတူးစင် ကို မြန်မာရေပိုင်နက်တွင် ရေနံတွင်းတူးရန် ယမန်နှစ်က ငှါးရမ်းအသုံးပြုခဲ့သည်။ (ဓါတ်ပုံ - မဇ္ဈိမ)
တရားသူကြီး တဦးစီကို ခန့်အပ်ခွင့်ရှိသည်။ ITLOS မှ ထုတ်ပြန်သော သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်
နိုင်ငံက ဂါနာနိုင်ငံသား တရားသူကြီး သောမတ်စ်မင်ဆာ (Thomas Mensah) ကို ရွေးချယ်ထားပြီး မြန်မာနိုင်ငံ
ကမူ အမေရိကန်လူမျိုး ဥပဒေပါမောက္ခ ဘဲနတ် အိပ်ခ်ျ အော့စ်မင် (Bernard H. Oxman) ကို ရွေးချယ် ထားသည်။
ဒါကာအခြေစိုက် ဒေးလီးစတား သတင်းစာ၏ ရေးသားချက်အရ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ကိုနိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဒီပူမိုနီ (Dipu Moni) က ဦးဆောင်မည် ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးသစ် ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင် ဤကြားနာပွဲသို့ တက်ရောက်မည် မတက်ရောက်မည်မှာ မရှင်းလင်းသေးပါ။
မြန်မာအစိုးရ၏ အဓိက ခေါင်းဆောင်များကို ဥရောပသမဂ္ဂက ဗီဇာ ပိတ်ပင်မှုများ ပြုလုပ်ထားသော်လည်း
မြန်မာနိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးကိုမူ “အဓိက ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ” အဖြစ် ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးထားသည်။ ထို့ကြောင့် သူ့အနေဖြင့် ဂျာမဏီရှိ ဤအမှုစစ်ဆေးရာသို့ သွားရောက်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ဓါတ်ငွေ့ တူးဖော်မှု ကိစ္စ မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နှစ်နိုင်ငံ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်က တင်းမာမှုဖြစ်ပွားမှု
ရေနံတွင်းတူးသင်္ဘော ၄ စင်းနှင့် အရှည်မီတာ ၁ဝဝ ရှိ ထရန်အိုးရှင်းလီးဂျင်း ရေနံတွင်းတူးစင်ကို ဆွဲယူလာသည့် ဆွဲသင်္ဘောတစင်းတို့ကို စောင့်ရှောက် လိုက်ပါလာသည့် မြန်မာရေတပ် သင်္ဘောကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အစိုးရ
ရေတပ်သင်္ဘော BNS Nirvoy မှ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့တွင် တွေ့ရှိကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။ ဆွစ်ဇာလန် အမေရိကန် ကမ်းလွန် ရေနံတွင်းတူး ကုမ္ပဏီ ထရန်အိုးရှင်း ပိုင်ဆိုင်သည့် ဤရေနံတွင်းတူးစင်ကို
ရေနံအစမ်းတွင်းများ တူးဖော်ရန် ကိုရီးယားဒေဝူးကုမ္ပဏီက ငှားရမ်း အသုံးပြုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ထိုသို့ ပင်လယ်နယ်နိမိတ်ကို ဝင်ရောက် ကျူးကျော်ခဲ့ကြောင်း ဒါကာ၏ စွပ်စွဲချက်သည် နှစ်နိုင်ငံအကြား အရေးပါသော ပထမဆုံး သံတမန် အငြင်းပွားမှု လက္ခဏာတရပ် ဖြစ်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် နှစ်နိုင်ငံ ရေတပ်များ ရင်ဆိုင်ထားကြသည် အထိ ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံး နှစ်နိုင်ငံအကြား ငွေကုန်များသည့် တင်းမာမှု ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။
နောက်တနေ့ နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့တွင် ဒါကာရှိ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အာဏာပိုင်များက မြန်မာသံအမတ်ကို ဆင့်ခေါ်ခဲ့ပြီး ကန့်ကွက်လွှာပေးခဲ့သည်။ မြန်မာအစိုးရက အငြင်းပွား နယ်မြေအတွင်းသို့ ရေတပ်သင်္ဘော ၄ စင်းကို စေလွှတ်ခဲ့သည့် အတွက် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှစစ်တပ်မှ ကျောထောက်နောက်ခံ ပြုပေးထားသည့် ကြားဖြတ်အစိုးရကို ဒေါသထွက်စေခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံက အေဒီ ၇ လုပ်ကွက်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည့် ကမ်းလွန်ဓါတ်ငွေ့ လုပ်ကွက်အတွင်း ရှိနေသည့် ထရန်အိုးရှင်း ရေနံတွင်းတူးစင်နှင့် မြန်မာရေတပ်၏ အစောင့်သင်္ဘောများကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ရေတပ်က ဖမ်းဆီး
ခဲ့သည်။ Transocean’s SEC ၏တင်ပြ ချက်အရ အဆိုပါ ရေနံတွင်းတူးစင်ကို ဒေဝူးကုမ္ပဏီက အစမ်းတွင်းများ တူးဖော်ရန် တရက်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၂၄,ဝဝဝ ဖြင့် ငှားရမ်းအသုံးပြုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံက သူတို့ရေပိုင်နက်အဖြစ် ကြေငြာထားသော်လည်း အဆိုပါ လုပ်ကွက်အမှတ် အေဒီ ၇ တွင် တွင်းတူးခွင့်ကို ဒေဝူးနှင့် တွဲဘက်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည့် Kogas တို့မှ ဝယ်ယူခဲ့ကြသည်။
ထိုသို့အငြင်းပွားနေသည့် ရေပိုင်နက်အတွင်း မြန်မာအစိုးရနှင့် ထရန်အိုးရှင်းတို့ ဝင်ရောက် ကျူးကျော်ခြင်း မပြုမီ ၃ ပတ် အလိုက မြန်မာစွမ်းအင်ဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးချုပ်လွန်းသီက နှစ်နိုင်ငံအကြား “ရေပိုင်နက် အငြင်းပွားမှုကို ဖြေရှင်း မပြီးမချင်း အငြင်းပွားနယ်မြေအတွင်း ဓါတ်ငွေ့အစမ်းတွင်း တူးဖော်မှုများ မပြုပါ” ဟု ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးကို အာမခံပြောကြားခဲ့သည် ဟု ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နေ့စဉ်သတင်းစာ New Age က ဗိုလ်မှူးချုပ်လွန်းသီကို ကိုးကားရေးသား ခဲ့သည်။
ဗိုလ်မှူးချုပ်လွန်းသီက ထိုသို့ကတိပေး ပြောကြားမှုကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် လျှပ်စစ်စွမ်းအား၊ စွမ်းအင်၊ သတ္တုအရင်းအမြစ် ဝန်ကြီးဌာန အကြံပေးအရာရှိချုပ် ဒေါက်တာ အမ်တာမင် (Dr. M. Tamim) နှင့် ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၈ ရက်နေ့က ဒါကာတွင် တွေ့ဆုံပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အစိုးရက ထိုသို့လူသိရှင်ကြား ကန့်ကွက်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက် နှစ်နိုင်ငံတပ်ဖွဲ့များကို နယ်စပ် တလျှောက် တပ်လှန့် တပ်စွဲထားမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ မြန်မာ ရေတပ် အရာရှိတဦးက အေအက်ဖ်ပီ သတင်းဌာနကို နိုဝင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့က ပြောကြားရာတွင် “ဒီပြဿနာကို ငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းဖို့ ကျနော်တို့ ကြိုးစားသွားမှာပါ။ ဒါပေမယ့် လိုအပ်လာရင် ကိုယ့်နိုင်ငံကို ကာကွယ်ဖို့ အသင့်ရှိပါတယ်။ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကိုလို လားပေမယ့် စော်ကားတာကိုတော့ သည်းခံနေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေမှုတွေကို ဆက်လုပ်သွားမှာပါ” ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
မြန်မာအစိုးရမှ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ၏ တောင်းဆိုပြောကြားချက်များကို တုံ့ပြန်သည့် အနေဖြင့် နိုင်ငံပိုင် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာတွင် ဆောင်းပါး ရေးသားတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအစိုးရ၏ ပြောကြားချက်များသည် “မှားယွင်းပြီး ဥပဒေနှင့်မညီသဖြင့်” အငြင်းပွါးနယ်မြေအတွင်း လုပ်ငန်းများဆက်လက် လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု ရေးသားထားသည်။
၂ဝဝ၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့ထုတ် အဆိုပါသတင်းစာတွင် ဆောင်းပါးတစောင် ဖော်ပြခဲ့ရာ အဆိုပါ ဆောင်းပါးက “ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ၏ မှားယွင်းစွာ တောင်းဆိုမှုများကို မြန်မာအစိုးရမှ ပယ်ချလိုက်ပြီး နိုင်ငံတကာ ဥပဒေများနှင့် အညီ နိုင်ငံ၏ အကျိုးစီးပွားများကို ကာကွယ်သွားရန်အတွက် အေဒီ ၇ လုပ်ကွက်အတွင်း လုပ်ဆောင်ရန်ရှိသည့် လုပ်ငန်းများကို ပြီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း” ရေးသား ဖော်ပြထားခဲ့သည်။
နိုင်ငံတကာဥပဒေတွင်မူ ပိုင်နက်အငြင်းပွားမှုများကို ငြိမ်းချမ်းသည့်နည်းဖြင့် အရင်ဖြေရှင်းရမည်ဖြစ်ကာ ပြီးမှသာ တွင်းတူးခြင်းကိစ္စများကို လုပ်ဆောင်ရမည်ဟု ဆိုထားသည်။
နှစ်ရက်အကြာတွင် ဒေဝူး၊ ထရန်အိုးရှင်းနှင့် မြန်မာအစိုးရတို့၏ သင်္ဘောများ အဆိုပါ နယ်မြေမှ ပြန်လည် ဆုတ်ခွာ သွားခဲ့သည်။ အခြေအနေ တင်းမာမှုများ လျော့ပါးစေရန် ကိုရီးယားနှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့က ကြားဝင်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်
ပေးခဲ့သည်ဟူသော သတင်းများလည်း ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ အဆိုပါ မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းမှ ဒေဝူးနှင့်
အတူ တွဲဖက်လုပ်ကိုင်သည့် ကုမ္ပဏီများတူးဖော်မည့် ဓါတ်ငွေ့အများစုမှာ တရုတ်နိုင်ငံသို့ တင်ပို့ရန် အတွက်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ တင်းမာမှုများ ဖြစ်ပွားအပြီး တလခန့်အကြာ ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ရိုက်တာ သတင်းဌာန၏ သတင်းပေးပို့ချက်အရ အေဒီ ၇ လုပ်ကွက်မှ အစမ်းတွင်း တူးဖော်ရာတွင် ရရှိသောအဖြေများမှာ “အားရကျေနပ်ဖွယ် မရှိလှကြောင်း” မြန်မာစွမ်းအင်ဌာန အရာရှိကြီးတဦးက ပြောကြားခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။
အဆိုပါ အမည်မဖော်လိုသူ အရာရှိက ဆက်လက်ပြောကြားရာတွင် “ဒီဓါတ်ငွေ့သိုက်က စီးပွါးဖြစ် ထုတ်လုပ်ဖို့ တွက်ခြေမကိုက်ဘူးဆိုတာ အတည်ပြုနိုင်ဖို့ နောက်ထပ် အစမ်းတွင်း ၄ တွင်း ၅ တွင်း လောက် ထပ်တူးရပါဦးမယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့ကြောင်းဆိုသည်။
ဒေဝူးအင်တာနေရှင်နယ် ကုမ္ပဏီက ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် မတ်လက ထုတ်ပြန်ခဲ့သော အစီရင်ခံစာအရ အဆိုပါအငြင်းပွား လုပ်ကွက်တွင် သူတို့နှင့်တွဲဖက်လုပ်ကိုင်နေသော ကုမ္ပဏီ ၃ ခုထွက်ခွာသွားပြီးနောက် သူတို့ပိုင် အစုရှယ်ယာများကို တိုးမြှင့်လာခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ ၂ဝဝ၈ နိုဝင်ဘာလ တင်းမာမှုများအပြီး အဆိုပါအငြင်းပွား နယ်မြေအတွင်း
နောက်ထပ် ရေနံရှာဖွေမှု လုပ်ငန်းများ ဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း ရှိမရှိကိုမူ အဆိုပါ အစီရင်ခံစာတွင် ရေးသားဖော်ပြ
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အနောက်ပိုင်း)၊ ပြည်ခရိုင်၊ ပြည်မြို့နယ် အမှတ် (၁) ရဲစခန်းအပိုင် န၀င်းရဲရိပ်သာနှင့် ပြည်အကျဉ်းထောင် လမ်းကြား ထီးစုလမ်းတွင် ၂၇၊ ၈၊ ၂၀၁၁ ညပိုင်းအချိန်က ပြည်မြို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဒုရဲအုပ် ဆွေမောင်မောင် အပါအ၀င် သူ၏မိသားစုများက အရပ်သူ အမျိုးသမီးတယောက်အား ၀ိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ခဲ့ရာ ထိုအမျိုးသမီးမှာ ဆေးရုံတွင် အတွင်းလူနာအဖြစ် တက်ရောက် ကုသနေရပါသည်။
၄င်းအမျိုးသမီးနှင့် ပတ်သက်သော မိသားစုအသိုင်းအ၀န်းမှ အမှတ် (၁) ရဲစခန်းတွင် အမှုဖွင့်တိုင်ကြားရာ
စခန်းမှူးမှ အမှုလက်ခံဖွင့်ပေးခဲ့ခြင်းမရှိပါ။ ထို့အပြင် ယနေ့ ၂၈၊ ၈၊ ၂၀၁၁ မနက်တွင် စခန်းမှူးမှ လျော်ကြေးငွေလက်ခံပြီး အမှုမဖွင့်ရန် ခေါ်ယူပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ထိုဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူ အရာရှိတယောက်မှ ပြည်သူလူထုအပေါ်
ကိုယ်ထိလက်ရောက် စော်ကားမှုကို အမှုမဖွင့်ဘဲ လူကြီးအားလုံးမှ ဇွတ်အတင်း ကျေအေးခိုင်းခဲ့ပြီး ငွေကျပ် ၄ သိန်းပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။
လူကြီးများ၏ ဖိအားပေးမှုကြောင့် ကာယကံရှင်မှ ကျေအေး မပေးလိုသော်လည်း ဖိအားများကြောင့် ကျေအေးပေးခဲ့ရပါသည်။
ယခုကဲ့သို့သာ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ပြည်သူလူထုကို ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပြီး ဖိအားများဖြင့် လျော်ကြေးပေးကာ စော်ကားနေလျှင် ပြည်သူများ မည်ကဲ့သို့ ဆက်လက် ရှင်သန်နေရမည်လဲ၊ ထို့အပြင် ဆင်းရဲတွင်းထဲမှ မိသားစုများကို ပြည်သူ့ရဲများက ဆက်လက်အနိုင်ကျင့် စော်ကားနေလျှင် မည်ကဲ့သို့ ဖြေရှင်းရမည်လဲ ဆိုသည်ကို အဖြေတခုတွေ့ရှိသည်အထိ ဆက်လက် တင်ပြပေးစေလိုပါတယ်ခင်ဗျား။
Tuesday, August 30, 2011 zarny win
နောက်တစ်ဖန် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို နေပြည်တော်ကို ဖိတ်မန္တက ပြုပြီး
၁၉-၈-၂၀၁၁ မှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြန်တယ်။ ဒါလည်း နိုင်ငံတကာကို “နိုင်ငံတော်အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့လည်း ဆွေးနွေးတယ်” ဖြစ်အောင် ဟန်ပြလုပ်ပြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အနှစ်သာရ ရှိတဲ့ဆွေးနွေးပွဲ မဟုတ်ပါဘူး။
ခုလတ်တလော ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံရေး စိတ်ဝင်စားသူတွေ၊ တက်ကြွသူတွေထဲက တချို့က “ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ကြံ့ဖွတ်အစိုးရဘက် ပါသွားပြီလား” ဆိုတဲ့ အတွေးတွေ ဝင်နေတာကို သိရပါတယ်။ ဒီလို စိုးရိမ်လို့ တွေးတာလည်း မှားတယ်လို့ အပြစ်မပြောသင့်ပါ။ ဒါပေမယ့် ဒေါ်စုက ဒီလောက်မညံ့ပါဘူး။ စိတ်ချပါ။ ဒေါ်စုဟာ ဘယ်တော့မှ ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားတွေနဲ့ ပြည်သူလူထုတရပ်လုံးကို ဒီမိုကရေစီ မရမချင်း ကျောခိုင်းသွားမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ရဲရဲကြီး အာမခံရဲပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့-
ဒါ့အပြင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဟာ
ဒေါ်စု ရဲ့ ခိုင်မာသော ခံယူချက်၊ မှန်ကန်သော ဆုံးဖြတ်ချက်၊ ရင့်ကျက်သော အတွေးအခေါ် အမြော်အမြင် ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို သိရှိတွေ့မြင်နေတာကြောင့် ဒေါ်စု ဟာ တချို့ထင်သလို အာဏာရှင်တွေဘက် ယိမ်းယိုင်မသွားဘူးဆိုတာ လုံးဝ သံသယကင်းပါတယ်။
ဧရာဝတီ~~~သို့ ( စိုင်းစိုင်းသန်းရွှေ(ကနေဒါ)+၀တ်မှုံကြိုင်ကြိုင်(အမေရိကား) )
Irrawaddy myitsone tribute by yeyint2011
အစဉ်အလာ--ကြီးလာခဲ့ သော--ရာဇ၀င်ရဲ့ --သတို့ သမီးအဖြစ်--သူ ဣနြေ္ဒကြီး စွာ
တောင်ပေါ်--အမြင့် တနေရာက-- သူလေ--ခရီးတွေ--နှင်ရင်း --မမောနိုင်--စုန်ကာ ဆင်းလာ
ကွေ့ ဝိုက်ကာရယ် --ထူးဆန်း ကကွက်မျိုး-- ကနေသလိုဘဲ
သူ--အမိမြန်မာပြည်ကို-- ရိုးသား ငြင်သာစွာရယ် အလုပ်အကျွေးပြုခဲ့ တယ်
ဧရာဝတီ--သူ့ ကံကြမ္မာရယ်--သနားစရာ ကောင်းအောင်
မကြာခင်-- အဆုံးသတ်ရတော့ မယ်
Time to say goodbye ငိုကြွေးရင်းနဲ့ ---သူနှူတ်ဆက်ပြီ
အပိုင်းပိုင်း-- ခုတ်ပိုင်းလို့ --အဖြတ်ခံပီး--လွန့် လူးရင်း-- အသက်ငွေ့ ငွေ့ 
အာဏာရှိနေသော်လည်း-- စဉ်ချင်မဲ့ သူတွေရဲ့ -- အမိန့် ကိုသူ လည်စင်းကာ
အကြံဥာဏ်မဲ့ တွေ--ကိုယ်ကျိုး တခု ဘဲ ကြည့် ပီး
ယန်စီ-မြစ်ဝါ ကို--မီးရောင်--ထိန် လင်း--နိုင်ဘို့ --သူစတေး--ရပီ
Time to say goodbye ငိုကြွေးရင်း---သူနှူတ်ဆက်ပြီ
အပိုင်းပိုင်း--ခုတ်ပိုင်းလို့ --အဖြတ်ခံပီး--လွန့် လူးရင်း အသက်ငွေ့ ငွေ့ 
ဖေးမသူ -- ကင်းဝေးလို့ နေပီ
သူ့ အသဲ နှလုံးများနဲ့ --- တည်ဆောက်မြစ်ဆုံ
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 8/29/2011 1 အကြံပြုခြင်း
သူမတစ်ဦးတည်းပါဝင်ရန်မဟုတ်ဘဲ။ သူမ၏ တရားဝင်ပါတီပါ ပါဝင်နေမည်ဖြစ်ကြောင်း
၂၆ သြဂုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ စာမျက်နှာ ၁၀
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 8/29/20110အကြံပြုခြင်း
ဘီဘီစီ ချယ်နယ်ဖိုးမှာ လွှင့်တဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ရိသ်ပို့ချချက် (Reith Lecture )
doc read with Myanmar3 font
Daw Aung San Suu Kyi's Reith Lectures 1~5
ပြည်တွင်းမှ ဂျီမေးလ်အကောင့် လုပ်နည်းများ (နည်းလမ်6းမျိုး)
[By Maung Luu Nge]
Internet QA DVB to me
show details 11:06 PM (20 hours ago)
ဖြည့်စရာရှိတာဖြည့်လိုက်ပါ။ continue လုပ်ပါ။ loading 10% ကနေ 90%
အထိလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ပြီးရင် security question ဖြည့်ခိုင်းတယ်။
ပြီးသွားရင် create account ကိုနှိပ်ပါ.. ဒါဆို အကောင့်အသစ်ရပါပြီ။
ဆာဗာကျပ်ခြင်းနဲ့ အင်တာနက် နှေးကွေးခြင်းကြောင့် loading မှာ 90%
တခုရှိတာက Gmail Account သစ်ဖွင့်မယ်ဆိုရင် username @ gmail . com
ထည့်ပေးရပါတယ်။ ဒါဆို Gmail sign in page ကနေ၀င်ရင် username
ရိုက်ထည့်ရုံနဲ့ ၀င်လို့ရပါပြီ။ Account Creation မှာ @ gmail . com
ကျန်ခဲ့ရင်တော့ Gmail sign in page ကနေ၀င်တဲ့အချိန်မှာ username @
blumail . org နဲ့ ၀င်ရပါလိမ့်မယ်။
Here's another method. (I have just recently used it to openanew
account for my aunt. And it works.)
1. Go to this site : https://hidemyass.com
2. Type "http://mail.google.com"
(Remember: If you getaAccess Denied page, just puta's' behind "http")
(၁) IE , Firefox တို.ကိုမသုံးပဲ Google Chrome Browser ကိုသာသုံးပါ၊
(၂) Your Freedom ကို Configure လုပ်တဲ.အခါ Use Wizard
ကိုသုံးပါ။အဲ.ဒီမှာချိတ်ဆက်လို.ရမယ်. Server List
တွေပေါ်လာပါလိမ်.မယ်။အဲ.ထဲက Germany Server တစ်ခုခုကိုသုံးပါ။
(၃) Signup လုပ်တဲ.အခါမှာလည်း Country နေရာမှာMyanmarကိုမရွေးပဲ၊ Germany
(၄) Connection အတည်ငြိမ်ဆုံးအချိန်ကိုသာရွေးချယ်ပြီး အကောင်.အသစ်လုပ်ပါ။
ဂျီမေး အသစ်ကို android phone (china version မပါ)
ထဲက account & sync>add account>google>create
အင်တာနက် ကွန်နက်ရှင်ရှိရင် ဖွင့်လို့ရပါတယ်။
ဘာမှ မတောင်းပါဘူး။ ကြိုက်သလောက်ဖွင့်လို့ရပါတယ်။
နောက်ဆုံးနည်းလမ်းက Mozilla မသုံးပဲ။ Chrome ကိုသုံးမယ်။
your freedom ဆော့ဖ်ဝဲလ်နဲ့ ချိန်ပြီး ရင်
ကော်နက်ရှင်ငြိမ်တဲ့အခါမှာသုံး။ ဂျာမဏီက ဆာဗာတစ်ခုကို ချိတ်ပြီးသုံးရင်
Face Book စာမျက်နှာမှ...
29 August 2011 Yeyintnge's Diary
Published on August 26, 2011 by မင်းလွင်
မြန်မာနိုင်ငံကို ၂၃ နှစ်ကြာ စစ်တပ်အာဏာရှင် အုပ်ချုပ်မှုက​နေပြီး​တော့​ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့​စည်း​အုပ်ချုပ်ပုံအ​ခြေခံဥပ​ဒေအရ ပြည်သူက​နေ ​ရွေး​ချယ်တင်​မြှောက်တဲ့​ အရပ်သား​ စစ်ဗိုလ်ချုပ်​ဟောင်း​တွေဆီကို မတ်လ ၃၀ ရက်​နေ့​မှာ တိုင်း​ပြည်အာဏာ လွှဲ​ပြောင်း​ခဲ့​ပါတယ်။ စစ်တပ်အုပ်ချုပ်မှုက​နေ ပြည်သူက ​ရွေး​ကောက်တင်​မြှောက်တဲ့​ အရပ်သား​အစိုး​ရဆီကို အာဏာလွှဲ​ပြောင်း​ပေး​လိုက်တယ်ဆိုတဲ့​ သ​ဘောထား​မျိုး​ပါပဲ။
အဲဒီ အရပ်သား​အစိုး​ရဆိုတာကလည်း​ စစ်ဗိုလ်ချုပ်​တွေနဲ့​ ဖွဲ့​စည်း​ထား​တဲ့​ အစိုး​ရအသစ်ပါ။ အဲဒီလို တမူထူး​ခြား​တဲ့​နေ့​မှာပဲ မြန်မာနိုင်ငံကို ပ​ဒေသရာဇ်ဆန်ဆန် အုပ်ချုပ်ခဲ့​တဲ့​ ကာကွယ်​ရေး​ဦး​စီး​ချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူး​ကြီး​ သန်း​ရွှေက​နေ ကာကွယ်​ရေး​ဦး​စီး​ချုပ်အသစ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး​မင်း​အောင်လှိုင်ကို အာဏာလွှဲ​ပြောင်း​တဲ့​နေ့​လည်း​ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်း​ပြည်ကို တချက်လွှတ်အာဏာနဲ့​ အုပ်ချုပ်ခဲ့​တဲ့​၊​ ဘဝရှင်မင်း​တရား​ကြီး​လို့​ လူသိများ​တဲ့​ ဗိုလ်ချုပ်မှူး​ ကြီး​သန်း​ရွှေ ​နောက်ပိုင်း​ မြန်မာနိုင်ငံဟာ စစ်​ရေး​၊​ နိုင်ငံ​ရေး​၊​ စီး​ပွား​ရေး​၊​ လူမှု​ရေး​ ဘာ​တွေ ​ပြောင်း​လဲခဲ့​သလဲ၊​ ဘယ်လိုမျိုး​ ​ပြောင်း​လဲသလဲ — မြန်မာ့​တပ်မ​တော်ရဲ့​ ကျဆင်း​တဲ့​ စိတ်ဓာတ်ပိုင်း​ဆိုင်ရာ စွမ်း​ရည်​တွေနဲ့​ ပတ်သက်လို့​ တပ်မ​တော်က​နေ အငြိမ်း​စား​ယူထား​တဲ့​ ဗိုလ်ချုပ်ချစ်လှိုင်၊​ ဗိုလ်မှူး​အောင်လင်း​ထွဋ်နဲ့​ ဗိုလ်ကြီး​ဇော်မိုး​တို့​ရဲ့​ သုံး​သပ်ချက်​တွေနဲ့​ တင်ပြသွား​ပါ့​မယ်။
အ​ရှေ့​တောင်အာရှမှာ တိုင်း​ရင်း​သား​လက်နက်ကိုင်အ​ပေါ် နှိမ်နင်း​ချေမှုန်း​ရေး​၊​ ဝါဒမတူ ဆန့်​ကျင်ဘက်နိုင်ငံ​ရေး​အဖွဲ့​အစည်း​တွေကို နှိပ်စက်တာနဲ့​ နာမည်ကြီး​တဲ့​ မြန်မာ့​တပ်မ​တော်ကို ၁၉၄၅ ခုနှစ်မှာ ဗြိတိသျှတပ်မ​တော်အကူအညီနဲ့​ ပြန်လည်ဖွဲ့​စည်း​ခဲ့​ပါတယ်။ လွတ်လပ်​ရေး​ ရပြီး​ခေတ် တ​လျှောက်လုံး​မှာ တပါတီအာဏာရှင်​ဟောင်း​ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး​ ဦး​နေဝင်း​က မြန်မာ့​တပ်မ​တော်ကို စနစ်တစ်ကျ တိုး​တက်ဖွဲ့​စည်း​ တည်​ဆောက်ခဲ့​ပါတယ်။ တရုတ်ဖြူ ကျူး​ကျော်မှုနဲ့​ ပြည်တွင်း​စစ် စစ်ပွဲ​တွေမှာ မြန်မာ့​တပ်မ​တော်ဟာ အရှိန်​ကောင်း​ကောင်း​နဲ့​ အင်အား​ကြီး​မား​ လာပြီး​တော့​ ၁၉၆၂ ခုနှစ်မှာ တိုင်း​ပြည်ရဲ့​ စစ်​ရေး​ကိုသာမက အုပ်ချုပ်​ရေး​ အာဏာအဝဝကို သိမ်း​ပိုက်ခဲ့​ပါတယ်။ အဲဒီကစလို့​ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့​ စစ်​ရေး​အကူအညီနဲ့​ ဗကပရဲ့​ စစ်​ရေး​အရှိန်အဟုန်ကို ထိန်း​သိမ်း​ထား​နိုင်ခဲ့​ပြီး​ နိုင်ငံအ​ရှေ့​ဘက်ခြမ်း​မှာ ရှိတဲ့​ ကရင်နဲ့​ မွန်စတဲ့​ တိုင်း​ရင်း​သား​ လက်နက်ကိုင်​တွေကိုလည်း​ပဲ အထိုက်အ​လျောက် ထိန်း​ထား​နိုင်ခဲ့​ပါတယ်။
၁၉၈၈ ခုနှစ်မှာ တပါတီအာဏာရှင်စနစ် ချုပ်ငြိမ်း​ဖို့​ ဆန္ဒပြပွဲ​တွေ ​ပေါ်​ပေါက်လာ ပြီး​တဲ့​နောက်မှာ စစ်တပ်က တိုင်း​ပြည်အာဏာကို သိမ်း​ပိုက်ပါ​တော့​တယ်။ အဲဒီ အာဏာသိမ်း​မှုမှာ ပါဝင်ခဲ့​ပြီး​ ၁၉၉၂ မှာ စစ်တပ်ကြီး​အကဲနဲ့​ နဝတ စစ်​ကောင်စီရဲ့​ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်လာတဲ့​ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး​သန်း​ရွှေက​နေ မြန်မာ့​တပ်မ​တော်ကို အ​ရှေ့​တောင်အာရှမှာ အင်အား​အကြီး​ဆုံး​ တပ်မ​တော်တခု ဖြစ်ဖို့​အတွက် စတင် ကြိုး​ပမ်း​လာပါ​တော့​တယ်။
တပ်ရင်း​၊​ တပ်မနဲ့​ စစ်တိုင်း​အသစ်​တွေကို တိုး​ချဲ့​ဖွဲ့​စည်း​ခဲ့​တယ်။ ​ခြေလျင်တပ်​တွေ တိုး​ချဲ့​ရုံသာမက နိုင်ငံတကာအဆင့်​မီ ကြည်း​တပ်နဲ့​ဆိုင်တဲ့​ ​လေ​ကြောင်း​ရန်ကာကွယ်​ရေး​ တပ်၊​ ဒုံး​ကျည်လက်နက်တပ်ရင်း​၊​ အ​မြောက်တပ်နဲ့​ သံချပ်ကာတပ်ရင်း​တွေ တိုး​ချဲ့​ဖွဲ့​စည်း​ခဲ့​ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူး​ကြီး​သန်း​ရွှေ ကာကွယ်​ရေး​ဦး​စီး​ချုပ် ရာထူး​က​နေ မတ်လ ၃၀ ရက်​နေ့​မှာ တရား​ဝင် လွှဲ​ပြောင်း​ပေး​ပြီး​ ​နောက်ပိုင်း​မှာ ကာကွယ်​ရေး​ဦး​စီး​ချုပ်သစ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး​ မင်း​အောင်လှိုင်ဟာ တပ်မ​တော်အဖွဲ့​အစည်း​ပိုင်း​ကို သိသာမြင်သာတဲ့​ အ​ပြောင်း​အလဲ​တွေ ဘာ​တွေ လုပ်​ဆောင်​နေပြီလဲ၊​ ဗိုလ်ချုပ်မှူး​ကြီး​သန်း​ရွှေ လက်ထက်နဲ့​ သူ့​ရာထူး​ကို ဆက်ခံတဲ့​ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး​မင်း​အောင်လှိုင်တို့​ လက်ထက် မြန်မာ့​တပ်မ​တော်ကြီး​က ဘာ​တွေ ဖြစ်​နေပြီလဲ။ တပ်မ​တော်မှာ တချိန်က ကာကွယ်​ရေး​ဦး​စီး​ချုပ် (​ရေ) တာဝန်ယူခဲ့​ဖူး​တဲ့​ အငြိမ်း​စား​ ဗိုလ်ချုပ်ချစ်လှိုင်က ခုလို သုံး​သပ်ပါတယ်။
“ဟိုအရင်နဲ့​ အခုနဲ့​ဆိုရင် ကိုယ်​ခေတ်ကိုယ်​ကောင်း​တယ်လို့​ ယူဆတဲ့​သူ​တွေ တချို့​ ရှိတယ်​လေ။ လူ​ပေါ်မှာ မူတည်တာ​ပေါ့​လေ။ သို့​သော် တိုး​တက်မှု ရှိတာက​တော့​ တိုင်း​ပြည်အတွက် တိုး​တက်​နေရမှာ​ပေါ့​။ ဘယ်အစိုး​ရမဆို ကိုယ့်​တိုင်း​ပြည် တိုး​တက်​အောင် လုပ်​နေကြတာပဲ​လေ။ လုပ်ပြီး​တော့​မှ မကြိုက်တာ ရှိရင် ရှိမယ်။ လုပ်တာက​တော့​ သူ့​မှာတာဝန်လည်း​ ရှိ​တော့​ လုပ်လည်း​ လုပ်မှာပဲ။ အဲဒီအရ တပ်ကို ဆက်ပြီး​ ထူ​ထောင်လို့​ ကျ​နော်တို့​ရဲ့​ တပည့်​တွေ၊​ သား​မြေး​တွေ ဆိုကြပါစို့​ ကျ​နော်တို့​ရဲ့​ တူ​တွေ သား​တွေလည်း​ ဆက်ထူ​ထောင် လာကြတာ သူတို့​လည်း​ ဟိုတုန်း​က အစဉ်အလာ​တွေ​တော့​ မ​မေ့​ မ​ပျောက်ဘဲ ဆက်လုပ်သွား​ကြတာပါပဲ။ တိုး​တက်မှု​တွေက​တော့​ ​စော​စောက ​ပြောသလို​ပေါ့​ ရုပ်ပိုင်း​မှာ​တော့​ တိုး​တက်တာ ​ပြောနိုင်တာ​ပေါ့​။ စိတ်ပိုင်း​သည် တွက်လို့​မရတဲ့​ ကိစ္စပါ။ ”
အရင် ဦး​နေဝင်း​လက်ထက်က ကာကွယ်​ရေး​ဝန်ကြီး​ဌာန အထူး​စစ်ဆင်​ရေး​အဖွဲ့​ ကစထမှူး​ ၂ ​နေရာ ရှိ​နေရာက​နေ ဗိုလ်ချုပ်မှူး​ကြီး​သန်း​ရွှေ လက်ထက်မှာ ၆ ​နေရာအထိ တိုး​ချဲ့​ဖွဲ့​စည်း​ခဲ့​ပါတယ်။ အရင်က မြန်မာ့​တပ်မ​တော်မှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး​ တဦး​တည်း​ ရှိခဲ့​ရာက သုံး​ဦး​အထိ တိုး​မြှင့်​ခဲ့​ပြီး​ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး​အဆင့်​ ရာထူး​တွေကိုလည်း​ တိုး​မြှင့်​ပေး​အပ်ခဲ့​ပါတယ်။ တပ်​တွေကို တိုး​ချဲ့​ရုံသာမကဘဲ အုပ်ချုပ်​ရေး​ရာထူး​အဆင့်​တွေကိုလည်း​ တိုး​မြှင့်​ပေး​တဲ့​ သ​ဘောပါပဲ။
ပြည်တွင်း​မှာ​နေထိုင်တဲ့​ ဗိုလ်ချုပ်ချစ်လှိုင်က​တော့​ (တပ်မ​တော်မှာ) စိတ်ပိုင်း​ဆိုင်ရာ စွမ်း​ရည် ကျဆင်း​နေတယ်လို့​ ​ပြောမသွား​ပေမယ့်​ ပြည်ပမှာ ​နေထိုင်တဲ့​ စစ်​ထောက်လှမ်း​ရေး​ အရာရှိ​ဟောင်း​ ဗိုလ်မှူး​ ​အောင်လင်း​ထွဋ်က​တော့​ မြန်မာ့​တပ်မ​တော်မှာ အဓိကစွမ်း​ရည်ကြီး​ သုံး​ရပ်ဖြစ်တဲ့​ စစ်​ရေး​စွမ်း​ရည်၊​ အုပ်ချုပ်​ရေး​စွမ်း​ရည်၊​ စည်း​ရုံး​ရေး​ စွမ်း​ရည်​တွေ ကျဆင်း​နေတယ်လို့​ ​ပြောပါတယ်။
“ကျတယ်လို့​ပဲ ​ပြောရမယ်ဗျ။ စည်း​ရုံး​ရေး​စွမ်း​ရည်၊​ စစ်​ရေး​စွမ်း​ရည်၊​ အုပ်ချုပ်​ရေး​စွမ်း​ရည်ဆိုပြီး​ စွမ်း​ရည်ကြီး​ သုံး​ရပ်​ပေါ့​ဗျာ။ ပြန်ချိန်ထိုး​ကြည့်​ရင် စစ်​ရေး​ စွမ်း​ရည်က က​လေး​စစ်သား​နဲ့​ ​ထောင်က ထွက်တဲ့​စစ်သား​နဲ့​ ဘယ်လိုမှ စစ်တိုက်လို့​ မရဘူး​။ ဒါ​ကြောင့်​မို့​ စစ်သား​တွေ ကျကြတာ။ အုပ်ချုပ်​ရေး​ စွမ်း​ရည်ဆိုတာကလည်း​ ရဲ​ဘော်ကို စား​ဝတ်​နေ​ရေး​နဲ့​ ​နေ​ရေး​ထိုင်​ရေး​ကအစ အိမ်ခန်း​တောင်မှ မစီစဉ်​ပေး​နိုင်ဘူး​ဗျာ။ ကိုယ့်​ဘာသာ တဲထိုး​ပြီး​နေရတယ်ဗျာ။ ကိုယ့်​ရိက္ခာ ကိုယ်ရှာစား​ပြီး​ ဆန်​လောက်ပဲ ​ပေး​တယ်ဗျာ။ ရိက္ခာ​တွေ ဖြတ်ပစ်တာ ရှိတယ်ဗျ။ ဒါမျိုး​တွေက အုပ်ချုပ်​ရေး​စွမ်း​ရည်ကို ဘယ်လိုမှ မမြှင့်​တင်နိုင်ဘူး​။ စည်း​ရုံး​ရေး​ စွမ်း​ရည်ဆိုတာက​တော့​ စပ်ဆက်တယ်​လေ။ အူမ မ​တောင့်​ဘူး​ဆိုရင် သီလမ​စောင့်​နိုင်ဘူး​။ ​သေနတ်ကိုင်တဲ့​ကောင်က ​သေနတ်နဲ့​ စည်း​ရုံး​တဲ့​ အခါကျ​တော့​ လာဘ်​တောင်း​တာ​ပေါ့​။ ဂိတ်ရှိရင် ​သေနတ်ပြပြီး​ ပိုက်ဆံ​တောင်း​ပြီ။ ရွာ​ရောက်ရင် အနိုင်ကျင့်​ပြီ။ အရင်တုန်း​က ရွာ​ရောက်ရင် ကြက်​လောက်ပဲ ယူတာ။ အခု​တော့​ မဟုတ်​တော့​ဘူး​။ ပိုက်ဆံယူတာတို့​ အကုန်လုံး​ ဖြစ်လာတာ။ ပွင့်​ပွင့်​လင်း​လင်း​ ​ပြောရရင်​တော့​ စွမ်း​ရည်သုံး​ရပ်စလုံး​က​တော့​ လုံး​ဝကို မရှိသ​လောက် ဖြစ်​နေပြီ။ တကယ့်​တကယ် စစ်ဖြစ်ကြည့်​ ကျ​နော်တို့​ တပ်မ​တော်ကြီး​က အ​မြှောက်​တွေ၊​ ​လေယာဉ်ပျံ​တွေသာ ရှိရင် ရှိမယ်။ ​ခြေလျင်တပ် မ​ကောင်း​ရင် စစ်မနိုင်နိုင်ဘူး​။”
မတ်လ ၃၀ ရက်​နေ့​မှာ တပ်မ​တော်ကာကွယ်​ရေး​ဦး​စီး​ချုပ်ရာထူး​ကို ဗိုလ်ချုပ်မှူး​ကြီး​ သန်း​ရွှေက​နေ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး​မင်း​အောင်လှိုင်ကို လွှဲ​ပြောင်း​ပေး​လိုက်ပါတယ်။ ကာကွယ်​ရေး​ ဦး​စီး​ချုပ်အသစ် ဖြစ်လာတဲ့​ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး​ မင်း​အောင်လှိုင်ဟာ DSA ဗိုလ်သင်တန်း​ အပတ်စဉ် ၁၉ မှာ တက်​ရောက်ခဲ့​ပြီး​ သူ့​အထက်က စီနီယာ ဗိုလ်ချုပ်​တွေကို ​ကျော်ပြီး​ ကာကွယ်​ရေး​ဦး​စီး​ချုပ် ဖြစ်လာတာပါ။ စီနီယာ ဗိုလ်ချုပ်​တွေက ဗိုလ်ချုပ်ကြီး​မင်း​အောင်လှိုင်ကို ဦး​စီး​ချုပ်အသစ်အဖြစ် လွယ်လွယ်ကူကူ လက်ခံပါ့​မလား​ဆိုတာ ​မေး​စရာ​မေး​ခွန်း​ ဖြစ်ခဲ့​ပါတယ်။ ဒါ​ပေမယ့်​ တပ်မ​တော်ထဲက ​အောက်​ခြေအဆင့်​ အရာရှိ အကြပ်စစ်သည်​တွေ ကြား​မှာ​တော့​ သိသာတဲ့​ပြောင်း​လဲမှုမျိုး​ ​တွေ့​ရမှာ မဟုတ်ဘူး​လို့​ အငြိမ်း​စား​အရာရှိတဦး​ ဖြစ်တဲ့​ ဗိုလ်ကြီး​ဇော်မိုး​က​တော့​ သုံး​သပ်ပါတယ်။
“​အောက်​ခြေက ဒါ​တွေ စိတ်မဝင်စား​ဘူး​။ ဥပမာ ​ပြောပြမယ်ဗျာ။ ​အောက်​ခြေက တပ်ရင်း​မှူး​ ဘယ်သူလဲဆိုတာကို ရဲ​ဘော်က ​တော်ရုံတန်ရုံ မသိဘူး​။ တပ်ခွဲမှူး​ ဆိုတာကလည်း​ ​ပြောမှ ​ဟေ့​ကောင် ဒါက မင်း​ တပ်ခွဲမှူး​ ဆိုမှ ​အော် ကျ​နော့်​တပ်ခွဲမှူး​လား​။ အဲလို​ပြောမှ သိတာ။ အဲလိုမျိုး​ပဲ တပ်ခွဲမှူး​ဆိုတဲ့​ အရာရှိကလည်း​ သူသိတဲ့​ အဆင့်​သည် သူ့​ပတ်ဝန်း​ကျင်မှာရှိတဲ့​ တပ်ရင်း​မှူး​တွေ၊​ တိုင်း​မှူး​ပဲ သိတယ်။ ကျန်တာ သူဘာမှ မသိဘူး​။ စိတ်မဝင်စား​ဘူး​။ သူလုပ်ရမယ့်​ အလုပ်သည် operation ကိစ္စ၊​ operation မှာ သူကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ပါပြီး​တော့​မှ အဓိက ဒဏ်ရာရမှု မဖြစ်​ရေး​ ဒါပဲ စိတ်ဝင်စား​တယ်။ သူတို့​က ကိုယ့်​ဘာသာ ကိုယ့်​လမ်း​ကြောင်း​ကို သွား​နေတာ။ တကယ်​တော့​ ​အောက်က အပိုင်း​က​တော့​ ဘယ်သူပဲ လာလာ အမိန့်​နာခံရမှာ။”
ဒါ​ပေမယ့်​ ကာကွယ်​ရေး​ဦး​စီး​ချုပ်အသစ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး​မင်း​အောင်လှိုင်ဟာ တပ်မ​တော်ကို အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ မနိုင်နင်း​တာ​တွေနဲ့​ ထိန်း​ချုပ်မှု​တွေ လစ်ဟာနိုင်တယ်လို့​ တပ်မ​တော်အရာရှိ​တွေနဲ့​ ပြည်တွင်း​ပြည်ပ စစ်​ရေး​အကဲခပ်​တွေက ထင်​ကြေး​ပေး​ သုံး​သပ်​နေကြပါတယ်။
တ​ဒေါ်လာ ကျပ် ၉၀၀ နှင့်​ ၁၀၀၀ ကြား​ သတ်မှတ်ရန်ရှိဟုဆို
Published on August 29, 2011 by ရွှေအောင်
အ​မေရိကန်​ဒေါ်လာနဲ့​ ကျပ်​ငွေ လဲလှယ်နှုန်း​ကို တ​ဒေါ်လာ ကျပ် ၉၀၀ နဲ့​ ၁၀၀၀ ကြား​ ထား​ရှိသတ်မှတ်ဖို့​ ရှိတယ်လို့​ အစိုး​ရဝန်ကြီး​တဦး​က ​ပြောပါတယ်။
စက်မှုဖွံ့​ဖြိုး​တိုး​တက်​ရေး​ဝန်ကြီး​ ဦး​စိုး​သိမ်း​က ပြည်တွင်း​စာနယ်ဇင်း​တချို့​ကို ​တွေ့​ဆုံ ရာမှာ ဒီလို ​ပြောလိုက်တာလို့​ ​တွေ့​ဆုံပွဲတက်တဲ့​ ဂျာနယ် အယ်ဒီတာချုပ်တဦး​က ​ပြောပါ တယ်။
“သွင်း​ကုန်ထုတ်ကုန် လုပ်ငန်း​ရှင်​တွေလည်း​ မထိပါး​စေရဘူး​။ စား​သုံး​သူ​တွေလည်း​ ထိပါး​မှု မရှိ​စေရဘူး​။ အထဲမှာ နိုင်ငံခြား​ငွေ ကိုင်​ဆောင်ထား​တဲ့​ ပြည်တွင်း​သုံး​ငွေ ကိုင် ​ဆောင်ထား​တဲ့​ လူ​တွေလည်း​ ထိပါး​မှု မရှိ​စေရဘူး​၊​ ​နောက်ပြီး​ နိုင်ငံရဲ့​ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၊​ ကုန်သွယ်မှုနဲ့​ ​ငွေ​ရေး​ကြေး​ရေး​ ကဏ္ဍများ​မှာ ထိပါး​မှုမရှိ​စေရဘူး​၊​ အဘက်ဘက်က ဘက်စုံ ​ထောင့်​စုံ ​ဆောင်ရွက်မယ်။ သူ့​ရဲ့​ တဦး​တည်း​အမြင်အရ ​ပြောမယ်ဆိုရင် ​ငွေလဲနှုန်း​ကို ၉၀၀ နဲ့​ ၁၀၀၀ ကြား​ထဲ မှန်း​တယ်တဲ့​။”
ပို့​ကုန်သွင်း​ကုန် လုပ်ငန်း​ရှင်​တွေအ​နေနဲ့​ စိုး​ရိမ်စိတ်မထား​ဘဲ လုပ်ကိုင်​ဆောင်ရွက် ကြဖို့​လည်း​ ဝန်ကြီး​က ​ပြောတယ်လို့​ ဆိုပါတယ်။
တ​ဒေါ်လာကို ၇၁၈ ကျပ်နှုန်း​အထိ ​ငွေလဲနှုန်း​ ကျ​နေတာ​ကြောင့်​ ဒီကိစ္စကို အ​ဆော တလျင် အ​ရေး​ယူ​ဆောင်ရွက်ဖို့​ စီး​ပွား​ရေး​ပညာရှင်​တွေက အစိုး​ရကို တိုက်တွန်း​ထား​ပြီး​ ​ဆောင်ရွက်ချက်ကိုလည်း​ ပြည်သူ​တွေကို အလျင်အမြန် အသိ​ပေး​ဖို့​ ​ပြော​နေပါတယ်။ အစိုး​ရရဲ့​ တရား​ဝင်သတ်မှတ်နှုန်း​က​တော့​ တ​ဒေါ်လာကို ၆ ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။
တရုတ်ပြည်ရဲ့ တဟုန်ထိုး စီးပွါးရေးတိုးတက်လာမှုကြောင့် ဖြစ်လာရတဲ့ စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်ဟာ တရုတ်ပြည်ထဲ က မြစ်တွေပျက်စီးခဲ့ရုံနဲ့ မပြီးဘဲ မြန်မာပြည်ကိုမွေးဖွားသန့်စဉ်ပေးခဲ့တဲ့ တခုတည်းသော မြန်မာအမျိုးသားပိုင် အမိ ဧရာဝတီကို သတ်ဖြတ်ဖို့ ကြိုးစဉ်ဆောက်နေတဲ့အဆင့်အထိ ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။ ကျနော့်အနေနဲ့ ဒီဓါတ်ပုံသတင်းဆောင်း ပါးမှာ ပြည်ထောင်စု၊ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးကိုချစ်တဲ့ မြန်မာတမျိုးသားလုံးကို တင်ပြချင်တဲ့ အခြေခံအချက်ကတော့ တ ရုတ်တွေဟာ သူတို့ကိုယ်ပိုင်မြစ်တွေကို ဘယ်လိုသတ်ဖြတ်ခဲ့ကြပြီလဲ။ သူတို့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ဘယ်လိုဖျက်ဆီး ခဲ့ကြပြီလဲ ဆိုတာကို ဘာအကျိုးကျေးဇူးတစုံတရာ မယ်မယ်ရရမရှိ မြန်မာတမျိုးသားလုံးအတွက် အဘက်ဘက်က ဘာ အာမခံချက်မှ မရှိတဲ့ ဧရာဝတီကို လည်မျိုညှစ်နေတဲ့ တရုတ်အကျိုးစီးပွါးသက်သက်အတွက် သခင်အားရ ကျွန်ဒဏ်ဝ လုပ်နေတဲ့ မျိုးဖျက်သစ္စာဖေါက်လောက်ကောင် ပုဆိန်ရိုးတစုကြောင့် ဖြစ်လာရတဲ့ မြစ်ဆုံရေအားလျှပ်စစ်ထုတ် ရေကာ တာတွေကြောင့် ဖြစ်လာမယ့် အကျိုးဆက်တွေကို နှိုင်ယှဉ်တွေးဆပြီး ဒီသေမင်းတမန် စီမံကိန်းကို အမျိုးသားရေး အသွင် သဏ္ဌာန်နဲ့ ရပ်တန့်နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ (မြစ်ချောင်းနှင့် ကမ်းရိုးတန်းအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့လွန် တရုတ်တွင် သင်ယူနိုင်ရန် ညှိနှိုင်းနေ By Popular News ဆိုတဲ့ သိန်းစိန်အစိုးရရဲ့ ဆင်သေကိုဆိတ်ရေနဲ့ဖုံးဖို့ ကြိုးစားနေ တဲ့ သွေးရူးသွေးတန်းလုပ်ရပ်တွေကို နားမယောင်ကြဘဲ အရှိအဖြစ်ကို လက်တွေ့ကျကျ ပကတိအတိုင်းမြင်နိုင်အောင် တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။)
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ခြမ်း ယန်ဇီပြည်နယ် နန်ချန်းမြို့အနီး ဖုဟေး မြစ်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် အစုလိုက်အပြုံလိုက် သေနေ သောငါးများ (August 17, 20011)
”တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီဟာဘယ်တော့မှအမှားကိုဝန်မခံဘူး” (ဟန်စ်ချန် – အာရှရေစွမ်းအင် Three Gorges Dam: China’s Dilemma)
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး Three Gorges Dam ကို ယန်စီမြစ်လည်ကနေဖြတ်ပြီး ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ စီးပွါးရေးသမားတွေ နဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေ သူတို့နဲ့ အဆွယ်အပွားတွေအားလုံး အကျိုးရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် နဲ့ ဂေဟဗေဒစံနစ်တွေအားလုံး ပျက်စီးခဲ့ပြီး တရုတ်တမျိုးသားလုံးအတွက် သမိုင်းဝင် ယန်ဇီမြစ်ကြီး ဘ၀ပျက်သွားခဲ့တာ ကို မျက်စိမှိတ် လျစ်လျူရှုခဲ့ကြပါတယ်၊ အာရှတိုက်ရဲ့အရှည်ဆုံးသော ယန်ဇီမြစ်ကြီးဟာ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ၁၈,၂၀၀ မီဂါဝပ် ထုတ်ပေးတဲ့ Three Gorges Dam ရဲ့ ၀ါးမြိုဖျက်ဆီးခြင်းကို အဖတ်ဆယ်မရအောင် ခံလိုက်ရပါပြီ။
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ခြမ်း ယန်ဇီပြည်နယ် နန်ချန်းမြို့အနီး ဖုဟေး မြစ်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် အစုလိုက်အပြုံလိုက် သေနေ သော ငါးများ (August 17, 20011)
(ယန်ဇီမြစ်ဆိုတာ တိဘက်ကုန်းပြင်မြင့်မှာမြစ်ဖျားခံခဲ့ပြီး တရုတ်ပြည်သူ သန်းပေါင်းလေးရာကို ရေချိုဖြည့်တင်းပေးနေ ခဲ့တဲ့ မြစ်တစင်းပါပဲ။) ဒီဓါတ်ပုံတွေဟာ တရုတ်အာဏာပိုင်တွေရဲ့ သဘာ၀၀န်းကျင်နဲ့ ဂေဟဗေဒစံနစ်ကို ဘယ်လောက် အလေးထားနေသလဲဆိုတဲ့ သက်သေခံပြယုဂ်တွေ ပါပဲ။
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ခြမ်း ယန်ဇီပြည်နယ် နန်ချန်းမြို့အနီး ဖုဟေးမြစ်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် အစုလိုက်အပြုံ လိုက် သေနေသော ငါးများ။ (August 17, 20011)
နန်ချင်းမြို့ဘေးမှာတင် ပုပ်ပွနေတဲ့ ငါးအသေကောင်တွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ ဖုဟေမြစ်ရဲ့ ဖြစ်ပျက်နေပုံပါပဲ။ (August 17, 20011) ဘာစက်မှုမှ မယ်မယ်ရရ မတိုးတက်ဘဲ သဘာဝပန်းဝန်းကျင်ကိုပဲ မှီခိုအားထားအသက်ရှင်နေရတဲ့ (ဧရာဝတီ နဲ့ မြစ်ကြီးငါးသွယ် မြစ်ငယ်ငါးရာကို မှီခိုနေရတဲ့) မြန်မာ့လူဦးရေရဲ့ ၇၀% ရာနှုန်းရဲ့ အနာဂတ်ဘ၀တွေကို ဒီမြင် ကွင်းတွေ အပေါ်ကနေ ပြက်ပြက်ထင်ထင် မြင်နိုင်ကြမှာပါ။
သိပ်မကြာခင်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းမှာ ကျနော်တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေ အခုမြင်နေရတဲ့ တရုတ်ပြည်က မြစ်တွေထဲကငါးတွေလို ပိုးလိုးပက်လက် သေသူသေ ဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်နဲ့ သေဖို့ကို စောင့်သူစောင့် ဘ၀ရောက်ကြရတော့မယ်ဆိုတာ သိစေ ချင်ပါတယ်။
ဒီပုံကတော့ ယန်ဇီမြစ်ကိုဖြတ်ပြီးဆောက်ခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဆိုပြီး တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီက ဟိတ်ဟန်ထုတ်နေခဲ့တဲ့ Three Gorges Dam ကြောင့် ဇူလိုင် ၂၇, ၂၀၁၁ နေ့က ဖြစ်ပွါးခဲ့တဲ့ ရေကြီးမှုတစိတ်တဒေသရဲ့ ဓါတ်ပုံပါ။ တ စက္ကန့်ကို ရေကုဗမီတာ ၇၀ ၀၀၀ ကျော် နှုန်းနဲ့ ထိမ်းမနိုင်သိမ်းမရ ဒလဟောထွက်လာတဲ့ ရေတွေကို တရုတ်ကွန်မြူနစ် ပါတီက အာဏာပိုင်တွေ မတားဆီးနိုင်ခဲ့ပါဘူး၊ ဧရာဝတီကို တရုတ်လက်ထဲထိုးအပ်ခဲ့တဲ့ မောင်အေးနဲ့ သိန်းစိန်တို့ မြေ ကြီးလက်ခတ်မလွဲ ဖြစ်လာမယ့် ဒီဆိုးကြိုးတွေအတွက် တိုင်ပြည်နဲ့ လူမျိုးကို ဘာအာမခံချက်မှ မပေးနိုင်ပါဘူး။ သူတို့ အာမခံချက် ပေးခဲ့တာကတော့ တရုတ်တွေကို ဧရာဝတီ ထိုးအပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ စာချုပ်မှာ လက်မှတ်ထိုးခဲ့တာပါပဲ။
တိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့ တရုတ်အများစုကြီးကတော့ သည်ဆည်ကြီးကို ယံဇီကိုသတ်ခဲ့တဲ့ ငရဲခန်းကြီးလို့ တွင်တွင်ခေါ်နေကြ ပါတော့တယ်။
ယန်ဇီကိုသတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ Three Gorges Dam ကြောင့် ၂၀၁၀ မှာ လူ ၁၂၀၀ ရေသင်္ချိုင်းမှာ မြှုတ်ခဲ့ရပြီး ဒေါ်လာသန်း ပေါင်း ၂၂ ဘီလီယံ ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။
မျိုးဖျက် ပုဆိန်ရိုး သေစ္စာဖေါက်လောက်ကောင်တစုကြောင့် ကျနော်တို့ရဲ့ နောင်လာနောက်သားတွေ ကနေ့ တရုတ်ပြည် ရဲ့ လူနည်စုကောင်းစားပြီး လူသန်းပေါင်းများစွာ ဘ၀ပျက်နေရတဲ့ အဖြစ်မျိုးကို မကြုံရအောင် အချိန်မနှောင်းခင် အမျိုး သားရေးအမြင်ဖြင့် တိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့ အလျှင်အမြန်ဝိုင်းဝန်းကြရန် လိုအပ်နေပါပြီ။ (သိပ်မကြာခင် ဖြစ်လာမဲ့ အထက်ကလို အနိဋ္ဌာရုံတွေအတွက် သိန်းစိန် နဲ့ မောင်အေး သာမက သူတို့အဖေ တရုတ်တွေလည်း ဘာအာမခံချက်မှ မပေး နိုင်ပါဘူး။ တရုတ်တွေ သူတို့မြစ်တွေဖျက်ဆီးပြီးလို့ အားလုံးရစရာမရှိတော့ချိန်မှာ နောက်ဖေးအိမ်က စမ်းချောင်းထဲမှာ အညစ် အကြေးစွန့်ဖို့လုပ်တဲ့ ဖြစ်ရပ်နဲ့ မခြားပါဘူး။)
မြန်မာတမျိုးသားလုံးရဲ့ ဒီသေမင်းတမန် စီမံကိန်းကြီးကတော့ ဖဲကြိုးဖြတ်ဖွင့်ခဲ့ပါပြီ။
(ဖတ်ရှုတဲ့အတွက် အဖိနှိပ်ခံ မြန်မာတမျိုးသားလုံးရဲ့ကိုယ်စား သင့်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။)
မြန်မာပြည်သည် ဧရာဝတီစီးသရွေ့ တည်ပါစေ။ (ဧရာဝတီ ပျက်တဲ့နေ့ဟာ မြန်မာပြည် အသက်ထွက်တဲ့နေ့ ပါပဲ)
အမှားတခုကို ကျူးလွန်ရန်အတွက် ဘယ်အမှန်တရားနဲ့မှ သက်သေပြ၍မရ
ငွေလဲနှုန်း သတ်မှတ်ရေး – စီးပွားရေးမဂ္ဂဇင်း အယ်ဒီတာခ...
မြန်မာတိုင်းမ်နှင့် The Voice သတင်းထောက်များ အစုအြ...
မြန်မာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ရေပိုင်နက် အငြင်းပွားမှု ကြားနာ...